Dowladda oo lagu eedeeyay caburin iyo Jebinta Qodob Dastuuri ah. – Kalfadhi
Dowladda oo lagu eedeeyay caburin iyo Jebinta Qodob Dastuuri ah.
in Aragti, Falanqeyn, Warar
MUQDISHO, 9 JAN 2019 (KALFADHI) –Ciidamada Booliiska Soomaaliya ayaa dhawaan joojiyay tababar maamul-wanaagga la xiriira oo uu Muqdisho ku qabanayay Xisbiga Wadajir. Arintaan ayaa dhalisay walaac laga qabo saameynta ka dhalin karto joojinta xoriyadda hadalka iyo kulanka dadweyne ee ku cad Dastuurka KMG ah.
Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya Qodobka 20aad waxa uu cadeynayaa Xorriyadda kulanka, Bannaanbaxa Cabashada iyo Codsi wareedka. Isla qodobkaas waxaa ku qoran, in qof kasta uu xaq u leeyahay kulamo iyo bannaabax cabasho ah oo si xasilooni ah u dhaca inuu qabsan karo fasax la’aan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Reysal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer fagaaro ka sheegay iney ilaalinayaan sarreynta Sharciga. Sidoo kale cid kasta oo ku xad-gudubta sarreynta Sharciga ayey sheegeyn in aysan ka ogolaan doonin.
Inkastoo ay sheegeyn madaxda Dowaldda Soomaaliya iney ilaalinayaan sarreynta Sharciga, hadane waxaa lagu eedeynayaa in iyagu ay ku xadgudbaan Sharciga.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa sheegay in amarkaan laga bixiyay madaxtooyada Soomaaliya ayna tahay caburin dadweyne. Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu dacwo u gudbiyay Guddiga doorashooyinka madaxda banaan ee Soomaaliya oo ay Guddoomiyaha ka tahay Xaliima Ismaaciil (Xaliima Yareey).
“Annaga siyaasad kama hadleyn dagaalna kuma jirin, waxaan wax bareynay arday Iskuulo iyo Jaamacado dhigta ama ka baxay”, ayuu yiri hogaamiyaha Xisbiga Wadajir.
“Goorma yey dembi noqotay in dhalinyarada soo koraya Dowladnimada la baro”, ayuu is weydiiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Xildhibaano ka tirsan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo aqoon-yahaano ayaa arintaan ku tilmaamay nasiib darro weyn. Xubnahaan ayaa madaxda Dowladda ka dalbadayn in aysan soo laaban arintaan oo kale.
Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in falkii dhacay uu muujinayo ku xad-gudubka qodob Dastuuri ah iyo caburinta siyaasiinta sida uu hadalka u dhigay. Sen. Xuseen ayaa ugu baaqay madaxda Dowladda Soomaaliya iney ka fiirsadaan go’aannada ay gaarayaan oo qaarkood ku xad-gudbaya Dastuurka.
“Madaxweyne waxaa tahay ilaaliya Dastuurka Qaranka sida uu qabo qodobka 87aad (A), sidaas darteed waa inaa dhowrtaa Sharciga”, ayuu yiri Senator Xuseen Sheekh Maxamuud.
“Waxaan ku xasuusinayaa inaa dhowrto qodobka 20aad ee xorriyadda kulanka, Bannaabaxyada maadaama ay Xukuumadda si joogto ah ugu tumato Dastuurka”, ayuu hadalkiisa raaciyay Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan Aqalka Sare.
Dr Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Sidoo kalane ka tirsan macalimiintii cashirada ka bixinayay tababarkii ay Ciidamada joojiyeen ayaa sheegay in arintaan ay shaki gelineyso doorashada Soomaaliya ee 2021ka.
“Arintaan waxay shaki gelineysaa in Dalka ay doorasho ka dhici doonto 2021. waxay na-tuseysaa cabsi gelin iyo caburin dadweyne”, Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamka.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay hey’adaha amniga oo ay uga jawaabayaan eedeynta loo jeediyay. xiriiro aan la sameynay masuuliiyinta amniga ayaa suurta geli weeyay inaan helno si wax looga weydiiyo eedeynta loo jeediyay Dowladda.
XILDHIBAANO DALBADAY IN LA QABTO KULAMADA GOLAHA SHACABKA.
Furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo markii 2aad baaqday.